Naratra voavelen’io hazo io teo amin’ny lohany ilay rangahy ary tsy afaka nihetsika koa ny vady aman-janany noho ny fandrahonana nataon’ireo mpanafika. Vola dimy alina sy roa hetsy ariary niampy firavaka sarobidy no voaroban’ireo jiolahy. Ankoatra izay dia nentin’ireo olon-dratsy koa ny omby telo tao am-bala. Fantatry ny tompon-trano ireo mpanafika ary efa hitany nihaodihaody teo amin’ny manodidina ny tranony izy ireo. Nampandre ny mpitandro ny filaminana ireo voatafika taorian’izay nefa tsy nahatratra ireo jiolahy. Tsaboina ao amin’ny CsbII Andramasina ilay rangahy ary eo am-pikarohana ireo mpanafika ny zandary ankehitriny.